Granite Ball ee Slättemossa | Booqo Hultsfred
Granite Ball ee Slättemossa
Bogga hore » Eeg & samee » Soojiidashada dalxiiska » Deegaanada dhaqan-taariikheed » Granite Ball ee Slättemossa
Granite Spherical waa dhagax ku adkaaday moolka dheer ka dibna gaadhay dusha sare inta lagu jiro lafaha dhulka. Slättemossa waa meesha kaliya ee Iswiidhan aad ka arki karto nooca dhagaxa gaarka ah.
Magaalada Slättemossa waxaa ku yaal laba buurood oo muuqda oo ka kooban kubbado granite ah. Waxay ku dahaaran yihiin hal ama dhowr lakab oo ah soodhada liinta iyo hornblende. Booska u dhexeeya kubadaha waxaa ka buuxsamay cufnaan adag. Markay gogosha barafku dhulka dhigto buuraha, qayb iskutallaab ah oo kubbadaha ka mid ah ayaa muuqatay. Waxay u egtahay kumanaan indhood inay kufiirinayaan martida. Qaybta soodhada kalluunka leh waxay ka dhigan tahay in cilmiga cilmiga dhulka ay sidoo kale ugu yeeraan indhaha dhagaxa mudnaanta.
Qubuuraha Järeda waxaa ku yaalo qeyb iskutallaab ah oo ka sameysan kubbadda granite.
Sababaha qarsoodiga awgood, YouTube waxay u baahan tahay oggolaanshahaaga si aad u soo rarto.
3.9 ka mid ah 5.0
10 faallooyin ku saabsan Google
4/5 4 bilood kahor
Caqli xumo laakiin u gaar ah Iswiidhan.
4/5 sanad kahor
Dalxiis aad u fiican oo loogu talagalay kuwa xiiseynaya cilmiga dhulka. Shayga kaliya ee loo yaqaan 'globular granite slab' ee dalka ka jira. Laakiin xusuusnow inaad uga tagto dubbaha dhagaxa guriga, dhagaxa weyn waa la ilaaliyaa. Intooda badani waxay ku hoos jirtaa mossada, laakiin waxaad arki kartaa dhowr mitir oo laba jibbaaran oo ka sii baxsan. Qariirada khariidadu waa meel khaldan, laakiin si fiican ayaa loo tilmaamay si aad u heli karto si kasta.
3/5 sanad kahor
Calaamadda ayaa si qaldan loo dhigay.
2/5 3 sano kahor
Aad u xiiso badan! Mar labaad ayuu aadayaa
5/5 3 sano kahor
Oh waxa dhagaxyo fiican!
2021-07-02T14:40:36+02:00Hawlaha, Deegaanada dhaqan-taariikheed|
Dhamaan bay'ada dhaqan-taariikheed